जो सधैं आन्दोलनमा छन्
संसद् विघटन भएको थियो। सत्ताको बागडोर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हालेका थिए। अर्कोतिर माओवादीले सशस्त्र युद्ध चर्काइरहेको थियो। रेडियोका हरेक समाचार बुलेटिनमा झडप र मर्नेहरुको लगत हुन्थ्यो।
जाे दुई वर्षको छोरा छाडेर जनआन्दोलनमा होमिइन्
यो सेतु विकको घर हो ? पिँढीमा टोलाएर बसिरहेका शेरबहादुर विकले पहिलो आवाज सुनेनन् । दोस्रोपटक अलि ठूलो स्वरमा फेरि सोधें । उनी चनाखो भए । टाउको हल्लाउँदै घरतिर आउने इशारा गरे । पिँढीमा रहेको कुर्सीमा बस्न लगाए । चिसो पानी खुवाए र ‘केही थियो कि हजुर ?’ भन्दै उनी आफैंले कुरा कोट्याउन थाले ।
जनआन्दोलन-२ का प्रथम सहिद दर्शनलालका परिवार भन्छन् : ‘राज्यले अपमान मात्र गर्‍यो’
लकडाउनका बीच मंगलबार सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ खुरहुरियास्थित जनआन्दोलन–२ का प्रथम सहिद दर्शनलाल यादवको घरमा पुग्दा उनकी ६५ वर्षीया अर्धांगिनी बच्चीदेवी यादव खेतमा गएकी थिइन् । उनका जीवितमध्येका जेठा छोरा सरोजकुमार यादव भेटिए ।
भुइँमान्छेलाई नछोएको लोकतन्त्र
निरंंकुशतालाई ढालेर नागरिक अधिकार स्थापित भएको दिन । ठीक १४ वर्षअघि यही दिन राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ गरेको थियो ।
‘लोकप्रिय होइन, नायक नेता चाहियो’
देवेन्द्र भट्टराईदुर्गा खनाल
खुला समाज, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा बहस गर्दै हिँड्न रुचाउने केदारभक्त माथेमा नागरिक समाजका अभियन्तासमेत हुन् । समाजको कुनै पक्ष अथवा शासकीय पद्धतिमा कहींकतै बेथिति/विसंगति रहेको आफ्नो विवेकले ठहर गर्नासाथै लेखेर वा बोलेर प्रतिरोध गरिहाल्ने माथेमाको शैली छ ।
जनआन्दोलन-२ डायरी : राजा झुकाउने मानवसागरको साक्षी हुँदा
अहिलेजस्तै त्यसबेला पनि काठमाडौंको सडक किनारका बिरुवामा पालुवा पलाएका थिए, फूल फुलेका थिए । सडकमा भने टायर र बारुदको गन्ध आउँथ्यो । सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प थिए । प्रमुख सहरमा कफ्र्यु लगाइएको थियो । शाही नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका बख्तरबन्द गाडी चोकचोकमा तैनाथ थिए । ‘गणतन्त्र जिन्दावाद’ को नारा आफैंमा बम पड्केजस्तो लाग्थ्यो किनकि त्यतिबेला राजतन्त्र थियो, शाही निरंकुश शासन थियो ।
लोकतन्त्र दिवस : लोकतान्त्रिक शासन, अलोकतान्त्रिक अभ्यास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुइटा कानुनलाई संशोधन गरे । जसबाट सहजै पार्टी फुटाउन र विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्न बाटो खुलेको छ ।
लोकतन्त्रमा लोक नहारोस् !
आजको ठीक १४ वर्षअघि नेपालको इतिहासमा कवि गोपालप्रसाद रिमालको गीतले भनेजस्तै ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि’ आएको थियो । र, त्यसले ‘उलटपुलट, उथलपुथल र हेरफेर’ ल्याएको थियो ।
लकडाउन र लोकतन्त्र
कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीका बेला विश्वमा लोकतन्त्रसँग जोडिएका दुई बहसहरु चलिरहेका छन् । जारी संकटबाट उम्किन सरकारहरु, विभिन्न समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले के गरिराखेका छन् ? अनि यस्तो बेलामा नेतृत्वलाई बाँध्ने व्यवस्था भनिएको लोकतन्त्रको कस्तो अवस्था रहन्छ ?